स्मार्टफोनको स्टोरेज भरिएको छ ? त्यसोभए यी सुझावहरू मार्फत स्पेस बढाउनुहोस् - Technology Khabar
» स्मार्टफोनको स्टोरेज भरिएको छ ? त्यसोभए यी सुझावहरू मार्फत स्पेस बढाउनुहोस्
अधिकांश समय मानिसहरुसँग स्मार्टफोनमा स्टोरेजको समस्या हुने गरेको छ। धेरै चोटि त्यस्ता अवस्था आउँदछन् जब हामी फोटो क्लिक गर्न चाहन्छौं तर फोन स्टोरेज भरिन्छ। स्टोरेज भरिएको कारण, धेरै महत्वपूर्ण फोटोहरू क्लिक गर्दैनौं ।
यस बाहेक, कम स्टोरेज को कारण, धेरै एपहरू डाउनलोड गर्न पनि सक्षम छैनन्। यस्तो अवस्थामा, यदि तपाईं यस समस्याबाट मुक्त हुन चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईं केहि महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
फोनमा खाली ठाउँ बढाउन, सेटिंग्समा जानुहोस् र क्यास खाली गर्नुहोस् । साथै, जुन एपहरु तपाईँका लागि उपयोगी छैनन् त्यसलाई हटाएर स्टोरेज कार्यहरू हटाउन मिल्छ । यदि फोनमा अधिक डाटा छ भने, यसलाई कम्प्युटर वा ल्यापटपमा सारेर खाली गर्नुहोस्। यससँगै तपाईंको डाटा पनि सुरक्षित हुनेछ र फोनमा ठाउँ पनि खाली हुनेछ।
संलग्न फाईल मेट्नुहोस्
प्रायस् हामी फाईलहरू डाउनलोड गर्छौं जुन ईमेलको साथ आउँछ जसले हाम्रो फोनको स्टोरेजलाई अनावश्यक बढाउँदछ। यदि संलग्न फाईल उपयोगी छैन भने, यसलाई डिलिट गर्नुहोस्।
अनावश्यक फोटोहरू नराख्नुहोस्
एपहरू मेटाएपछि पनि, त्यहाँ कम स्टोरेज छ भने फोटो र भिडियोहरू मेट्नुहोस् जुन फोनको ग्यालरीमा उपयोगी छैनन् । यसले धेरै ठाउँ दिन सक्छ। उही समयमा, व्हाट्सएपमा आउने फोटो र भिडियोहरू समय समयमा हटाइ रहनुहोस्।
कसरी आईफोनमा ठाउँ बढाउने
यस बाहेक, आईफोन प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो फोनमा ठाउँ बढाउन सेटिंग्समा गएर स्टोरेज र आईक्लाउडमा जानुहोस्। यस पछि, मुख्य स्टोरेजमा जानुहोस् र हेर्नुहोस् जुन फाईल उपयोगी छैन, त्यसलाई हटाउनुहोस्।
एनआईसी एशिया बैंकको खाता अब कनेक्ट आईपीएसबाटै अनलाइन भेरिफाई गर्न सकिने